महिला लघुवित्तको प्रतिकित्ता शेयरमूल्य ४ हजार नाघ्यो
२१ वैशाख, काठमाडौँ । महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको प्रतिशेयर मूल्य ४ हजार नाघेको छ । आज कारोबार सुरु केहि समयमा नै कम्पनीको शेयरमूल्य १० प्रतिशत अर्थात ३७८ रुपैयाँले बढेर ४१५८ रुपैयाँ पुगेको हो ।
चैत ३ गतेदेखि नेप्सेमा कारोबार खुलेको कम्पनीको शेयरमूल्य निरन्तर बढिरहेको छ । नेप्सेले महिला लघुवित्तको शेयरलाई ३१३ रुपैयाँ १६ पैसादेखि ९३९ रुपैयाँ ४८ पैसा ओपनिङ्ग रेन्ज दिएको थियो। त्यस अनुसार लघुवित्तको पहिलो कारोबार प्रतिकित्ता ४३८ रुपैयाँ १० कित्ता शेयर खरिदबिक्री भएको थियो।
महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले माघ ३० गतेदेखि फागुन ५ गतेसम्म जारी पूँजी १० करोड रुपैयाँको ४० प्रतिशतले हुन आउने रकम ४ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रतिकित्ता १०० अंकित दरका ४ लाख कित्ता साधारण शेयर निष्काशन गरेको थियो । त्यसमध्ये ०.५ प्रतिशत अर्थात ५ हजार कित्ता शेयर कर्मचारीहरुका लागि र २० हजार कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याएर बाँकी ३ लाख ७५ हजार कित्ता सर्वसाधारणको लागि निष्काशनमा ल्याएको थियो।
सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सको १० लाख कित्ता बोनस शेयर नेप्सेमा सूचिकृत
२४ वैशाख, काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा शुक्रबार…
नेपाल लाईफको २१ बर्ष, १ खर्ब बढीको जीवन बीमाकोष
२४ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २१…
सुनको मूल्य एकैदिन ११०० रुपैयाँले बढ्यो, कति पुग्यो तोलाको ?
एनएमबि बैंकले २ अर्ब बराबरको ऋणपत्र निष्काशन गर्दै, कति पाइन्छ त ब्याज ?
आज डलरको भाउ घट्यो, यस्तो छ अन्य मुद्राको मूल्य विवरण